Dagaal Beeleedyada waxaa abaabusha Dowladda, si dareenka shacabka isaga jeediso – Somali Top News
March 18, 2019 March 18, 2019 Somali Top News	0 Comments
Todobaadkan kaliya ku dhawaad 50 qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleedyo ka qarxay gudaha dalka gaar ahaan deegaanka Cadalle oo hoos yimaada maamulka Hirshabelle kana tirsan gobalka Shabeelaha Dhexe iyo deegaanka Xeraale ee gobalka Galgaduud oo hoos imaada maamulka Galmudug.
Dagaal Beeledyadan waxaa qeyb ka ah ciidamad dowladda oo amaro ka heysta Taliyahooda taa oo banaanka keentay shakiga laga qabay dowladda hada jirta ee Madaxweyne Farmajo iyo Ra’isul Wasaare Kheyre hogaamiyaan.
Dagaaladan waxaa abaabulkooda loo soo maraa mas’uuliyiin katirsan maamulada dalka oo xiriir wanaagsan kala dhaxeeya Fahad Yaasiin oo ah ninka heysta taliska Nabad Sugidda Soomaaliya, isaga ayaana bixiya qarashadka oo xukuumadda u soo dhiibto.
Waxyaabaha shakiga banaanka keenay waxaa kamid ah madaxda ugu sareysa kama hadlin ilaa hadda, hadii aysan waxba ka ogeyn waxey kala dhex dhigi lahaayeen ciidmada dowladda sida ay sameyn jirtay dowladii Xasan Sheekh iyo tii Sheekh Shariif.
Fashil dhan walba ah ayaa heysta Nabad iyo Nolol dhanka gudaha iyo dibadda, ciidamada dowladda Todobadkan iyo kii ka horeeyay waxey ka soo baxayaan furamaha dagaalka oo mushaar aan helin Shan bil oo isku xigta, amniga Muqdisho oo faraha kabaxay iyo kala shaki siyaasadeed soo kala dhexgalay Farmajo iyo Kheyre.
Si aan dowladda loogu mashquulin waxeyb bilowday iney beelaha Soomaaliyeed kala disho oo ay isku dirto si ay kaga baxsato in lagu mashquulo iyadoo Farmaajo uu qorsheynayo inuu ka dhoofo Muqdisho Todobadkan gudihiisa.
W/Q: Tafatiraha Somali Top News
← Shirkadda DP World oo shaacisay dhaqaalaha kaga baxay dekadda Berbera
Somalia army withdrew front bases for unpaid salaries, Al shabaab retook →